Aminy dia samy tsy hitondra voka-tsoa ho an’ny firenena na ny fikasana hanangana tetezamita vaovao na ny firosoana maimaika amin’ny fifidianana. Mampanontany tena ny tena tian’ireo kandida sy mpanao politika atao amin’ilay fihetsiketsehana fitakiana ny hanokafana ny lisi-pifidianana, hoy izy. Tsy hampiova na inona na inona anefa io, hoy izy. Raha ny fifidianana filoham-pirenena indray dia nambarany fa tsy hitondra vahaolana mihitsy ho an’ny firenena io raha mbola mivangongo eo am-pelatanan’ny olona iray ny fahefana. Azo atomboka amin’ny fotoana rehetra ilay fanorenana ifotony ka io no vahaolana. Tsy maintsy miainga eny ifotony ny fanarenana sy fampandrosoana ny firenena. Ny olana mantsy hatramin’izay dia ilay rafitra efa nampahantra antsika ihany no nampiasaina fa ny olona nitondra fotsiny no niova, hoy izy. Tsy mbola nisy mihitsy mpitondra nahavita ny fotoam-piasany ara-dalàna tao anatin’ny filaminana teto, hoy ny mpitarika ny antoko ADN, ka dia mbola hisisika amin’ny tsy mety ihany ary ve isika ?